तपाईं आफुलाई आफैं ‘कुरुप’ छु जस्तो महशुस हुन्छ ? मनोविद् यस्तो भन्छ — Harpraharnews.com
२८ वषिर्य दिपा पुन (नाम परिवर्तन) जसलाई आˆनो नाक बाङ्गो छ भन्ने कुराले औडाह भएको रहेछ । सानो छँदा लडेर नाकमा चोट लागेको थियो । त्यही कारण नाक बाङ्गो छ भन्ने पिरोलो छ, उनलाई ।
यसको साइड इफेक्ट के देखिएको छ भने, चक्कर लाग्ने, डर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने, छटपटी हुने, निरास हुने, मनमा आत्महत्याको सोच आउने, रुन मन लाग्ने, मुटु ढुकढुक हुने, टाउको दुख्ने जस्ता थप समस्या पनि उनमा देखिएका छन् ।
जसलाई शारीरिक कुरुपता विकार (बडि डिस्मोफिर्क डिसअर्डर) भनिन्छ । यो रोग लागेकाहरु आफु र आˆनो शारीरिक अंगप्रति ज्यादै संम्वेदनशिल हुने गर्दछन् । शरिरमा सामान्य घाउ, दाग आयो भने पनि त्यसलाई ठुलो सम्भिmने, आˆनो शारीरिक रुपलाई लिएर लज्जाबोध गर्ने गर्छन ।
पुरुषहरु भने मासंपेशीको बनावट र आकारलाई लिएर, चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । प्राय ः १५ देखि ३० वर्षको उमेरमा यो समस्या देखिने गर्छ । पुरुषभन्दा महिलाहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
प्राय : अविवाहितमा यो समस्या देखिन्छ । किशोरावस्थामा पुगेपछि विशेषगरी किशोर किशोरीहरु आˆनो शरिर र शारीरिक परिवर्तनप्रति बढी नै संम्वेदनशिल हुन्छन् । शारीरिक कारणले अरुबाट अपहेलित वा लज्जित हुनु पर्ला कि भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताउने गर्छ । आफ्नो शरीरप्रति बढी नै संम्वेदनशिल हुँदा वा चासो राख्दा यो रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
यस्तो विकार किन पैदा हुन्छ ?
केटाकेटीहरु तथा किशोरकिशोरीहरुलाई मोटे मोटी, काले काली, नेप्टे नेप्टी, डल्ले डल्ली, घोडानाके, ओठे आदि जस्ता नामले बोलाउने जिस्काउने जस्ता व्यवहार गर्दा उनीहरुको मस्तिष्कमा यही कुराको छाप पर्न जान्छ । जसले गर्दा उनीहरु आˆनो शरिरको भागलाई लिएर बढी संम्वेदनशिल हुने, सोच्ने र चिन्ता गर्ने गर्दछन् । विस्तारै यो रोगको रुपमा विकास हुन्छ । महिलाहरुको शरिरको सुन्दरतालाई बढी महत्व दिने कारणले गर्दा पनि यो रोग महिलाहरुमा बढी लाग्ने गर्छ ।
मार्क नेपाल -मनोसेवा केन्द्र